ओलीको खेल ख'त्तम , यसरी गु'म्यो बहुमत ! - Rising Dainik
ओलीको खेल ख’त्तम , यसरी गु’म्यो बहुमत !
May 4, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on ओलीको खेल ख’त्तम , यसरी गु’म्यो बहुमत !
काठमाडौं, । नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित २१ जना सांसदले राजीनामाको तयारी गरेका छन् । माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षधर प्रत्यक्ष निर्वाचित २१ जनाले राजीनामा दिने तयारीमा सत्ता राजनीतिको रणनीतिक उद्देश्य लुकेको छ ।
देउवा फेरी प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का , यसरी पुग्यो बहुमत
मुग्लिन सडक खण्डको खहरे खोलामा ट्रक ख’स्यो, दुई जना घा’इते
करिब एकसय गि’द्ध मृ’त फे’ला, अचानक कसरि मृ’त्यु भयो यी गिद्द’को ?